UiPath: Ọrụ ntanetịime Web - Ọkachamara nke ọma
A na-eji akwụkwọ mmemme dị ka XHTML na HTML nweta ya ozi bara uru na ederede na ụdị oyiyi. A scraper web bụ Ngwaọrụ Mmemme Ngwaọrụ (API) nke na-ewepu ozi sitere na blọọgụ dị iche iche na saịtị dị ike. Ndị ọrụ dịka Google na Amazon na-enye ọtụtụ ngwá ọrụ ntanetị iji nweta ọrụ gị. UiPath dị mma karịa ọrụ ntanetị weebụ ma ọ bụ usoro. Ngwaọrụ a na-edebanye aka na saịtị, data ntanetị nke na-agbasa ibe weebụ, nzacha ma gbanwee ya na ụdị dị iche iche. Mgbe ahụ, ọ na-ebudata faịlụ na draịvụ ike gị ma na-azọpụta oge gị na ike gị. Ọ yiri ezigbo ihe nchọgharị weebụ na crawler nke nwere ike ịkọwapụta saịtị gị. UiPath na-enyere aka melite njikwa search engines nke saịtị gị ma mepụta ndị na-ahụ maka weebụ weebụ.
Ebe nrụọrụ weebụ siri ike:
Ị nwere ike igosi data nchịkọta ma offline na online. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha data site na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ na e-commerce, ị ghaghị ịtinye URL ya ma mee ka UiPath rụọ ọrụ ya. UiPath ga-eji nyocha nkọwa na nkọwa ngwaahịa nke Alibaba, eBay, na Amazon, na-enye gị nsonaazụ ziri ezi na nke a pụrụ ịdabere na ya.
Ezi maka ndị ọkachamara:
UiPath na-eme ka ụba na-arụ ọrụ na ọ dị mma maka ndị ọkachamara, ndị mmepe, ndị nchịkọta weebụ, na ndị ọchụnta ego. Ọ na-agba ọsọ ngwa ngwa ntinye data ma na-enweta gị nsonaazụ zuru oke na nke ọma na ihe nkeji. N'otu aka ahụ, ngwá ọrụ a dị mma maka ndị na-eme nchọpụta na-enyere ha aka nyochaa online akwụkwọ akụkọ na eBooks.
interface enyi na enyi:
UiPath kacha mara amara maka interface enyi ya.Ị nwere ike nyochaa ederede site na ntinye njem na ntanetị onwe onye na ọrụ a. O nwekwara ike iwepu ihe oyiyi, vidiyo na faịlụ ọdịyo, PDF akwụkwọ na faịlụ HTML maka ndị ọrụ. Ngwaọrụ a na-arụ ọrụ ọ bụla na ibe weebụ ọ bụla, ekele maka atụmatụ ya ahaziri maka ime ka o kwe omume.
Ngwá ọrụ nnukwu exporting:
N'adịghị ka ngwaọrụ ndị ọzọ na-ekpuchi weebụ, UiPath nwere ikike ịchụpụ dị mma. Iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịchekwa data scraped na faịlụ ederede, mbupụ na XML na HTML, ma ọ bụ detuo ya na disks disks. Ngwaọrụ a jikọtara ya na usoro sistemụ niile na ihe nchọgharị weebụ. UiPath na-eme nyocha omimi, na-emepụta akụkọ nchịkọta, ma na-ebuga data scraped gị na FTP maka iji ọrụ ntanetị. Ịnwere ike ibudata ya na diski ike gị ma ọ bụ chekwaa data na nchekwa data ya.
Ụdị njirimara mara mma: